Maninona ny mpivady sasany no tafaroboka amin'ny fitsangatsanganana sy ny fiverenana miaraka - Fifandraisana
Maninona ny mpivady sasany no tafaroboka amin'ny fitsangatsanganana sy ny fiverenana miaraka
Samy efa teo daholo isika na nanambitamby namana iray namakivaky izany - ny tsingerin'ny fanaparitahana.
Indraindray ianao sy ny taloha dia tsy afaka namela azy fotsiny. Mandra-pahatonganao.
… Ary avy eo manova ny sainao ny iray aminareo.
Mety hampisavoritaka tokoa izy io ary matetika mampahory. Ny tsy fahazoana antoka ny amin'ny fifandraisanareo dia mety hisy vokany ratsy amin'ny lafin-javatra maro amin'ny fiainanao ary mety hahavery tokoa.
Ity lahatsoratra ity dia hijery ny fomba fahitan'ny olona an'ity loop ity, ary ny fomba fialana amin'izany, na inona na inona dikan'izany!
Ahoana no fomba hialantsika amin'ilay tsingerina?
Nisaraka àry ianao sy ny olon-tianao. Manao izany hatrany ny olona. Mampihoron-koditra ary mikorontana, na dia samy manao izay fara herinao mba hamaranana ny zavatra amin'ny teny hoe 'sariaka' aza.
Mampanantena ny hifanome toerana ilaina ianao handrosoana ary hanaiky hihaona amin'ny namana atsy ho atsy.
Na dia tsara be aza izany, dia betsaka ny vintana mety tsy hiasan'izany.
Manelingelina ny zava-drehetra ny fahatsapana, indrindra ny fisarahana.
Ny olona sasany dia handeha hiaina ny fiainany manokana… rehefa afaka izany, izany hoe volana vitsivitsy nisaonana sy nanandrana fatratra ny handefa hafatra an-tariby tamin'ny sakaizany raha mbola nitolona tamin'ny finday kosa ny namany.
Ny hafa kosa hahazo ‘volombava fisarahana’, hiditra gym, ary hihaona amin'olona vaovao ao anatin'ny iray volana. Na izany na tsy izany, misy olona misaraka ary mifikitra amin'izany.
Fa inona no mitranga ao izany cycle dia ny fisarahana tsy mandeha.
Ny taloha dia mandefa hafatra tsy tapaka aminao amin'ny andro nahitanao fotoana nahatsiravina tany am-piasana ary nahatsapa ho manirery ianao. Midona amin'ny vadinao taloha ianao ary manapa-kevitra ny ho matotra ary hisotro kafe.
Samy mahatsapa ianareo fa tsy nifankahita, ary tena tsy mitovy ny zavatra amin'ity indray mitoraka ity. Omenao fotoana faharoa .
Ny antony manapa-kevitra ny hanandrana indray aorian'ny fisarahana dia miankina amin'ny olona voakasik'izany - fa tsy ny olona roa ihany amin'ny ny fifandraisana.
Ny fianakaviana sy ny namana ananantsika manodidina antsika rehefa mandalo fisarahana izahay dia tena misy fiatraikany amin'ny fitondran-tenanay.
Raha milaza aminao ny namanao akaiky indrindra hanaiky fa vita soa aman-tsara izy ireo, dia hanao izay farany azony atao izy ireo hanampiana anao hihoatra izany. Avelany hitomany ianao avy eo ary hanampy anao handroso.
Raha milaza aminao foana ny namanao fa mihevitra izy ireo fa nanao fahadisoana ianao na ny namanao, dia hanomboka hanontany tena ianao raha tokony hanome zavatra hafa handehanany.
Rehefa efa mahatsapa fihetseham-po sy marefo isika dia saika matoky ireo olon-tiantsika sy ny hevitsika mihoatra ny atokisantsika ny tenantsika.
Ny fomba nifaranan'ny fifandraisana dia misy fiatraikany amin'ny fahatsapantsika aorian'izany.
Indraindray, ny zavatra tsy mazava tsara rehefa manapa-kevitra ny hampitsahatra ny zavatra ny mpivady. Ity fahatsapana asa tsy voavaha ity dia mety hahatonga antsika hanontany tena raha nandray fanapahan-kevitra tsara. Izany dia mety hitarika antsika hanatratra ny taloha, izay afaka manomboka ny fizotrany manontolo ary hitazona antsika ho voafandrika isaky ny mandeha.
Ireo olona roa voarohirohy dia miharihary fa misy fiatraikany lehibe amin'ny zava-mitranga taorian'ny fisarahana. Raha samy olona mitebiteby ianao, dia mety hisy fanaintainana sy fikorontanana be eo amin'ny fisarahana, na fiaraha-miasa izany na tsy nampoizina.
Raha efa tsy azonao antoka ny zava-mitranga sy manana ahiahy mandritra ny fiarahana dia mety hahatonga anao hanontany tena amin'ny zava-drehetra ny fisarahana. Indraindray ny fahatsapana sy ny paranoia mikorontan-tsaina antsika dia mamerina antsika any amin'ny taloha satria manahy izahay fa tsy nanao safidy tsara.
Ny fanirery matetika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarahan'ny mpivady miverina. Na izany aza, matoky ianao fa nanapa-kevitra tamin'ny fanapahan-kevitrao tamin'io fotoana io, ny fahatairana sy ny fanaintainan'ny maha mpitovo tampoka dia tena mety hahatonga anao hanatona ny sakaizanao taloha.
Ny fahatokisan-tena ihany koa dia tafiditra eto - ny maha mpitovo dia mety hahatonga antsika hahatsapa, tsy ampoizina, tsy tiana. Mahatonga antsika hieritreritra fa tsy mahasarika sy mankaleo isika, miaraka amin'ireo teny mampihoron-koditra rehetra ampiasainay hilazana ny tenanay indraindray!
Mazava ho azy, raha samy mahatsapa fomba mitovy amin'izany ny olona voarohirohy rehetra, dia mifampiresaka izy ireo satria mampionona ny miaraka amin'ny olona mahalala anao ary nahatonga anao hahatsapa ho tsara amin'ny tenanao taloha.
Ny fiverenana miaraka aorian'ny fisarahana dia mahazatra be, ary mety ho noho ny antony maro izany.
Indraindray dia tena izy satria samy nahatsapa ianao fa nanao hadisoana ary te hiverina amin'ilay mandeha.
Amin'ny fotoana hafa, karazana… fotsiny io.
Inona no dikan'ny fifandraisana?
Raha ianao no namarana ny fifandraisana dia hanomboka hahatsikaritra ireo zavatra madinidinika rehetra nandroaka anao voalohany ianao.
Raha namarana ny zavatra tamin'ny voalohany ny namanao dia mety ho tonga saina be loatra amin'ny zavatra rehetra ataonao ianao.
Raha tsy azonao antoka ny antony nahatonga ny raharaha dia ho fantatrao tsara ny fihetsinao ary hanara-maso ny sakaizanao ianao amin'ny famantarana ny fahasosorana.
Raha fantatrao ny antony namaranana azy ireo (oh: 'clingy' loatra ianao), dia hanomboka hanalavitra ny tenanao ianao ary hiasa mafy ianao hanaporofoana fa niova ianao.
Na izany na tsy izany, ianareo roa dia samy hanitsaka ny atody ary ho lasa maharary ny mifanakaiky.
Ny safidy iray dia samy hikiry mafy ianareo roa fa tsy hadisoanareo ny hanananao fahasahiana sy fahatokisan-tena tafahoatra. Hanjary hahasosotra anao haingana izany ary mety tsy ho ela ny raharaha.
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny tsy hiraharaha ilay zava-misy hoe nisaraka, izay tsy salama ihany koa.
zavatra noforonina hatao amin'ny sakaizanao
Amin'ny alàlan'ny mody milaza fa tsy misy fipoahana eny an-dalana, dia hiaina ao amin'ny tontolo nofinofy ianao - samy hiala amin'ny fahazaran-dratsy avy ianareo ary ianareo aza mifamaly satria tianao ho tonga lafatra ny zavatra.
Mampalahelo fa matetika io dia miteraka fihenjanana bebe kokoa ary fifamaliana lehibe kokoa aza amin'ny farany.
Samy manana tanjona kendrena ao an-tsaina ianareo roa fa marina tsy zava-misy manantena ny hahatonga ny zavatra ho tonga lafatra tampoka .
Mazava ho azy, ny tranga mety hitranga dia samy hihazona zavatra be loatra amin'ny fifandraisana taloha ianao.
Samy manana fikasana tsara isika rehetra raha ny amin'ny handrosoana - manaiky isika hanomboka indray ary hanadino izay nitranga.
Mety handeha ve ity? Mety tsy izany.
Mbola hanohy hanandrana hatrany hatrany ihany ve isika? Eny, eny hanao izany isika.
Ahoana no ahafahanao miala amin'ny tsingerina?
Raha efa lavitra an'ity lahatsoratra ity ianao dia fantatrao fa tsy maintsy miova ny zava-drehetra.
Sarotra ny miaiky fa manimba tena ny fitondran-tenanao, ary sarotra ny maka sary an-tsaina ilay olona tianao dia mitana andraikitra poizina amin'ny fiainanao. Ny zavatra tadidio dia tsy misy diso ianareo roa.
Be dia be ny tantara sy ny fitiavana eo aminareo samy izy - maninona no tsy te hitandrina an'izany ianareo?
Maharary ny famelana ny fitiavana, saingy mampanaintaina ihany koa ny mitazona ny tenanao ho voafandrika amin'ny tsingerina tsy mahasalama. Misy lehibe fahasamihafana eo amin'ny tena fitiavana sy ny firaiketam-po .
Ny zavatra voalohany aloha - mifampiresaka.
Tsy amin'ny alàlan'ny sms na an-telefaona. Mipetraha mifanatrika amin'ny vadinao ary miresaka momba izay tadiavinao.
Rehefa tratra amin'ity hazakazaka ity ianao dia mety ho sarotra ny mahatadidy izay tena tadiavinao amin'ilay fifandraisana.
Indraindray, olona fotsiny no tadiavinao satria efa nahazatra anao izany. Indraindray, tena malahelo ny vadinao ianao ary te hampandeha azy.
Indraindray, te hameno ny banga amin'ny firaisana sy ny firaisana ianao izay nipoitra tsy azo ihodivirana. Indraindray io dia fitambaran'ireo zavatra ireo ary indraindray tsy fantatrao hoe inona izany.
Amin'ny firesahana ny zavatra tadiavianareo roa dia ho ampy fitaovana kokoa ianareo handray fanapahan-kevitra momba ny fijanonana miaraka amin'ny zavatra tsara na mamarana indray mandeha.
Raha mahatsapa toy ny dingana lehibe na sarotra ity satria ny fifandraisanareo dia tery na ny fifandraisan-davitra tsy dia ny teboka matanjaka indrindra dia misy hatrany ny làlan'ny torohevitra momba ny fifandraisana.
Raha ny marina dia mpivady maro no mahita fa io no fomba tsara indrindra hiresahana sy hiatrehana olana iray toa io atrehinao io satria manampy amin'ny fanazavana ny zava-misy, mahita vahaolana ary manao izany rehetra izany nefa tsy miady hevitra kely.
Ny tolo-kevitray momba izany dia ny serivisy an-tserasera avy any. Amin'ny alàlan'ny fifandraisanao amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana manokana aminy, ianao dia hahita fotoana mety tsara kokoa hahatongavana any amin'ny farany ambanin'ny antony mahatonga ny fifandraisan'ny bisikileta amin'ny fomba fanaovany azy sy ny fomba hialana amin'ny tsingerina.
raha te hiresaka amin'olona izao ianao na handamina fivoriana mandritra ny fotoana sy daty hifanarahanareo roa.
Raha manapa-kevitra ny hiatrika an'io ianareo roa ihany dia efa manapa-kevitra ny…
Nanapa-kevitra ny hanolo-tena tokoa ianao - ity no fotoana farany hiarahanareo miaraka satria samy hifikitra amin'ny fijanonana miaraka ianareo.
Nahazo torohevitra vitsivitsy izahay raha ity no lalana hidinao.
Fanoloran-tena! Lazao ny namanao sy ny fianakavianao. Ity dia dingana iray izay matetika mandingana ny olona rehefa voafandrika ao anaty tsingerina izy ireo, satria tsy fantany 100% izay tadiaviny.
Angamba ianao te hanafina izany miafina satria menatra ianao angamba fantatrao lalina fa tsy tianao haharitra izany.
Tsarovy fotsiny izany sarotra ny fifandraisana ary tsy maintsy apetrakao amin'ny asa haharetan'izany. Midira ao aminy amin'ny toe-tsaina mety.
Mamelà heloka. Mety tsy afaka manadino ireo zavatra nitranga tamin'ny fifandraisanao voalohany tamin'ny vadinao ianao, na ireo fotoana 5 'on' teo anelanelany, fa mila manomboka mamela heloka ianao.
Mamelà ny heloka amin'ny namanao tamin'ny zavatra taloha. Raha tsy azo avela heloka izy ireo dia tsy tokony hieritreritra ny hanolo-tena amin'izy ireo akory ianao.
Raha azonao atao ny mijery ny hadisoan'izy ireo sy ny tsy fahombiazany ary mbola maniry ny hanao an'io asa io dia mila mifikitra amin'izany ianao.
Tsy afaka mitondra zavatra nataon'izy ireo taloha ianao ary hitazona izany hanohitra azy ireo. Izany dia hiteraka tsy fahatokisana sy fitaintainana izay tsy hifarana tsara mihitsy.
Mifampiresaka. Ny mpivady sasany amin'ity tsingerina ity dia nakatona satria matahotra ny hiteraka olana hafa izy ireo.
Raha misy zavatra mahasosotra anao dia resaho izany. Ny fomba tokana hiasan'ity fifandraisana ity dia raha toa ianao ka mihetsika toa izany fotsiny - fifandraisana.
Mbola mila zavatra mitovy amin'izany ihany ianao: fiarovana, firaisana ara-nofo , fanohanana ary fitiavana.
Aza raisina ho toy ny vintana farany nataonao satria avy eo ianao dia hiezaka mafy ny ho tonga lafatra ary tsy handeha maharitra.
Misokatra sy mahitsy - samy efa niatrika zavatra mitovy ianareo roa, noho izany tsy mila mody na manafina ny zavatra ataonareo ianareo.
Sa ajanona io
Raha mamarana ny zavatra tsara ianao, dia mila manao izany. Tsy misy famaranana ny zavatra raha samy manana ao ambadiky ny sainao ianao fa hiaraka indray tsy ho ela.
Raha mbola misy raharaham-barotra sy tsy fahatokisana be dia be dia mila mifampiresaka lava be ianareo.
Raha misaraka sy miala amin'ny tsingerina ianao dia araho ireto dingana ireto:
Lazao amin'ny olona. Averina indray, ny maha tompon'andraikitra amin'ny hetsika ataonao dia manan-danja tokoa amin'ny lafiny fandrosoana.
Mety efa nahazatra ny sakaizanao tamin'ny sakaizanao / namanao ny namanao, noho izany mety tsy hanadino ny fihetsikao fotsiny izy ireo.
inona no hatao ho azy amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Manomboka izao dia mila fantatr'izy ireo fa vita ianao. Amin'ny fomba ofisialy. Hanohana anao mihoatra ny noeritreretinao izy ireo, ka ampiasao ny azy ireo tsy fivadihana ary ny finamanana hanosika anao.
Soraty. Manorata lisitry ny antony mahatonga anao misaraka amin'ny vadinao taloha.
Tsy tokony ho ratsy toetra izany, fa mila lisitra marim-pototra ny antony hamarananao zavatra ho tsara.
Ny ampahany aminao angamba tsy dia hino ny tenanao amin'ny voalohany, satria efa nahazatra anao ny nilaza fa hatsahanao izany ary avy eo tsy tena ataonao!
Zahao ny lisitranao isaky ny mahatsiaro ho mihetsiketsika ianao, dia hanampy anao betsaka izany.
Tombano mialoha. Hahatsiravina izany, aleo tsorina.
Io no ho fisarahana sarotra indrindra nandalo hatrizay, satria avelanao handeha ihany ilay olona amin'ny farany ary koa ny fanantenana fa mety handeha izy.
Mila manome fotoana be dia be ianao hisaonana sy hisosa. ianareo dia mandalo an'io dia ho tsapanao fa fanapahan-kevitra mety io, saingy mila manaiky ianao fa mety mila fotoana kely vao tonga eo amin'io sehatra io.
Malemy paika amin'ny tenanao amin'ny voalohany - ataovy izay hahatsapanao ho tsara, na fisaintsainana, yoga, binges Netflix, na fipetrahana ao anaty fandroana ary hitomany mafy. Ianao no manao anao.
Avy eo, henjana ny tenanao. Tsy ilay olona ho anao io ary tsy mamaritra anao ny fisarahana. Mila mihazakazaka ianao ary mifehy ny fiainanao.
Nofarananao tamin'ny antony ny zavatra, ary mila manararaotra izany ianao - maniry fahalalahana bebe kokoa, maniry fahaleovan-tena bebe kokoa, tsy te ho anisan'ny zavatra misy poizina, te hiverina amin'ny maha-ianao anao.
Mbola tsy azonao antoka hoe inona no hatao amin'ny fiarahana miasa / ivelanao?Ity toe-javatra ity dia iray izay handray soa be dia be avy amin'ny torohevitry ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana. Na te hiresaka irery ny olana ianao na amin'ny mpivady dia tsara ny milaza ny eritreritrao sy ny fahatsapanao amin'ny antoko tsy miandany izay afaka manome torohevitra avy eo.Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra zavatra amin'ny fomba iray na hafa. Tsotra.
Raha tsy mandeha ny raharaha dia io no fomba mety hisarahana amin'ny olona iray
Raha te hiverina amin'ny fitiavana amin'ny mpiara-miasa maharitra ianao dia ataovy ireo zavatra ireo
Fitiavana ny fitiavana: famantarana 5 ny fahatsapanao azy ireo
Ny tena fitiavana dia tsy maharitra mandritra ny androm-piainana (ary tsara izany)
Mandra-pahoviana no maharitra ny dingan'ny volan-tantely?
Mankaleo eo amin'ny fifandraisanareo? Anontanio ny tenanao amin'ireto fanontaniana 6 ireto
ny fomba hanaovana herinandro iray mandeha haingana
zava-misy mahafinaritra momba anao hizara any am-piasana
famantarana tsy tia ahy intsony izy
Manahirana ahy ny mijery ny mason'ny olona
tahotra ny hijery ny mason'ny olona
maninona ny lehilahy no manosika sy misintona